ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Tauktae ပိုမိုပြင်းထန်လာ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ညနေပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်နိုင် - Xinhua News Agency
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Tauktae ပိုမိုပြင်းထန်လာ ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ညနေပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်နိုင်
နယူးဒေလီ ၊ မေ ၁၇ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Tauktae သည် ယနေ့ မေ ၁၇ ရက်တွင် အလွန်ပြင်းထန်သော မုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အရှိန်မြှင့်လာခဲ့ပြီး အိန္ဒိယနိုင်ငံ ဂူဂျာရတ်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ညနေပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်နိုင်ကြောင်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာန(IMD)က ပြောကြားခဲ့သည်။ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း Tauktae သည် အလွန်ပြင်းထန်သော ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အရှိန်မြင့်လာခဲ့ပြီး မေ ၁၇ ရက် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၅ နာရီခွဲအချိန်တွင် မွန်ဘိုင်းမြို့၏ အနောက် – အနောက်တောင်ဘက် ၁၆၀ ကီလိုမီကွာခန့် ၊ အာရေဗျပင်လယ် အရှေ့အလယ်ပိုင်းကို ဗဟိုပြုနေကြောင်း ကမ္ဘာမြေသိပ္ပံဝန်ကြီးဌာနအား ကိုးကား၍ အိန္ဒိယနိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာန(IMD)က ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ညနေပိုင်းတွင် ဂူဂျာရတ်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ရောက်ရှိနိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၅၅-၁၆၅ မီတာမှ တစ်နာရီလျှင် ၁၈၅ မီတာအထိ လေတိုက်နှုန်းဖြင့် အလွန်ပြင်းထန်သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအဖြစ် ညပိုင်းတွင် Bhavnagar ခရိုင်ရှိ Porbandar နှင့် Mahuva ဒေသအကြား ကို ဖြတ်သန်းသွားနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
ဂူဂျာရတ်ပြည်နယ်အစိုးရက အနိမ့်ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသမှ လူပေါင်း ၁၅၀,၀၀၀ အား ရွှေ့ပြောင်းထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
IMD ၏ ပြောကြားချက်အရ သက်ငယ်မိုးထားသည့် လူနေအိမ်များ ပျက်စီးခြင်း အပါအဝင် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု အများအပြား ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။ တာဝန်ရှိသူများက လေယာဉ်ပျံသန်းမှုများ ၊ လျှပ်စစ်မီး နှင့် ဆက်သွယ်ရေးလိုင်း ပျက်တောက်မှု ၊ လမ်းများ ရေကြီးရေလျှံ ဖြစ်ပေါ်မှုများအပြင် ရထားလမ်း နှင့် အချက်ပြစနစ်များ အသေးအဖွဲ့ ပြတ်တောက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည်ကို သတိပေးထားသည်။
မေ ၁၇ ရက် အစောပိုင်းတွင် မွန်ဘိုင်းမြို့၌ လေပြင်းတိုက်ခတ်မှု နှင့် မိုးရွာသွန်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လေဆိပ်အား ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီမှ နေ့လည် ၂ နာရီထိ ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မွန်ဘိုင်းမြို့ တောင်ပိုင်းရှိ Worli နှင့် မွန်ဘိုင်းမြို့၏ အနောက်ဘက်ဆင်ခြေဖုံးရှိ Bandra တို့အား ဆက်သွယ်ထားသည့် Bandra-Worli Sea Link တံတားကိုလည်း ပိတ်ထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ဆက်တည်းမှာပင် အိန္ဒိယ လေတပ်(IAF)က မေ ၁၆ ရက်တွင် ကာလကတ္တားမှ Ahmedabad သို့ အလေးချိန် ၁၆.၅ တန်ရှိ (NDRF) အမျိုးသားသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တုံ့ပြန်ကယ်ဆယ်ရေး အထောက်အပံ့များ ပစ္စည်းများ နှင့် လူ ၁၆၇ ဦးကို C-130J လေယာဉ်နှစ်စင်း ၊ An-32 လေယာဉ်တစ်စင်းဖြင့် ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ယခုအထိ ဆိုင်ကလုန်းမုန်းတိုင်း Tauktae ကြောင့် မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် ဆက်စပ်သည့် ဖြစ်စဉ်များကြောင့် လူ ၆ ဦး သေဆုံးခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Cyclone Tauktae intensifies, likely to hit India’s western coast by evening
NEW DELHI, May 17 (Xinhua) — Cyclonic storm Tauktae Monday intensified into an extremely severe storm and is likely to hit India’s Gujarat coast by the evening, the India Meteorological Department (IMD) said.
Tauktae intensified into an extremely severe cyclonic storm and lay centered at 5:30 a.m. local time on Monday over east-central Arabian Sea, about 160 km west-southwest of Mumbai, the federal ministry of earth science quoting the IMD said.
It said the cyclone is very likely to reach Gujarat coast in the evening and cross the area between Porbandar and Mahuva in Bhavnagar district during the night asavery severe cyclonic storm withamaximum sustained wind speed 155-165 kmph gusting to 185 kmph.
The local government in Gujarat has evacuated 150,000 people from low-lying coastal areas.
According to the IMD, massive damage including destruction of thatched houses is expected. Officials have warned of flying objects, damage to power and communication lines, flooding of roads as well as minor disruption to railway lines and signaling systems.
Reports said Mumbai experienced light rainfall and gusty winds early Monday, and the airport has been closed from 11 a.m. to2p.m. local time.
The city’s Bandra-Worli Sea Link,abridge that links Bandra in the western suburbs of Mumbai and Worli in south Mumbai, has been closed.
Meanwhile, the Indian Air Force (IAF) on Sunday deployed two C-130J and one An-32 aircraft for transportation of 167 personnel and 16.5 tonnes of load of NDRF from Kolkata to Ahmedabad.
So far six people have been killed in rain-related incidents due to cyclone Tauktae. Enditem
ရုရှား နှင့် တာဂျစ်ကစ္စတန် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်း၍ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးစနစ် တည်ဆောက်မည်
တရုတ်နိုင်ငံ၏ Sinovac COVID-19 ကာကွယ်ဆေး စတုတ္ထအသုတ် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိ